I-2018 i-RSW / i-US Marketer-i-Arhente yoNyaka oMtsha | Martech Zone
Ngo-2018 i-RSW / i-US Marketer-I-Arhente ye-New Year Outlook
Lwesine, ngoFebruwari 8, 2018 NgoLwesihlanu, Februwari 9, 2018 Douglas Karr
Ukuba ubuza abanini bearhente yentengiso ukuba benza ntoni, nokuba bayakhula okanye hayi, kwaye bazuza njani ngeenkonzo abazinikelayo… Ndiqinisekile ukuba uyakufumana iimpendulo ezahlukeneyo kwinto nganye. Andithandabuzi ukuba sonke siyayithanda into esiyenzela abathengi bethu, kodwa sonke sifumana indlela esilunge ngayo kwaye siyikhokele loo ndlela.
The I-2018 i-RSW / i-US Marketer-i-Arhente yoNyaka oMtsha we-Outlook infographic isekwe kuphononongo lwethu lwamva nje, kwaye ijolise kwiindawo ezimbini zeshishini: okokuqala, ibonisa indlela abathengisi kunye neearhente, ngokumangalisayo, zilungelelaniswe ngokusondeleyo ngokubhekisele kumceli mngeni obonakalayo, ulindelo lwenkcitho kulindeleke, kunye nolindelo lolindelo kwaye okwesibini, Iindlela ezimbalwa eziphambili zearhente yakho ekufuneka izazi.
Kutheni ungayiqesha iarhente?
Iiarhente zinezibonelelo zokulinganisa iinkampani ezingenako ukungqinelana. Njengearhente, akufuneki ndixhalabe kakhulu ngezopolitiko zaseofisini, abasebenzi abagulayo, inzuzo yabasebenzi, okanye eminye imicimbi yemihla ngemihla ecothisa iinkampani. Ayisiyomba kwiinkampani, ewe. Kukho izibonelelo zamaqela angaphakathi kunye nezixhobo, nazo.
Xa siqhubela phambili nenkampani, senza itoni yomsebenzi ngaphambili kwaye sikhawulezise ixabiso lethu ngokuhamba kwexesha. Iinkampani ziyaxabisa ukuba sinobungcali obudinga amaxesha ngamaxesha. Intsebenziswano enkulu.
Lilonke, ngexabiso lomqeshwa omnye okanye ababini, unokufumana iqela liphela kwiarhente. Hayi ixesha elipheleleyo, ewe, kodwa nokufumana iqhezu lexesha leentlobo ezahlukeneyo zezinto ezinokubangela ifuthe elikhulu ekusebenzeni kweshishini lakho.
Kungenxa yoko le nto infographic evela kwi-RSW / US ayothusi ngokwenene. Sisebenza ngokubambisana nabathengisi yonke imihla kwaye sihlala kunye nabo ukuqinisekisa ukuba babona imbuyekezo enkulu kutyalo-mali lwabo lokuthengisa. Sityala imali kakhulu kwitekhnoloji kuba singazisasaza ezo ndleko phakathi kwabaxhasi abaninzi. Kungenxa yoko le nto sihlala sinezixhobo ezilungileyo kunye namaqonga okusebenza kuthelekiswa nabathengi bethu-yinkonzo esinokuthi sandise kubo.
tags: NkonzoInkcitho yearhentemngeniinkcitho kwintengiso yedijithaliInkcitho kwintengisorfpinkcitho kwimidiya yoluntuitalenteinkcitho yearhente yemveliiintsingiselo
Intengiso yePodcast iza kubudala